We Fight We Win. -- " More than Media ": မီဒီယာတွေမှာ တွေ့ လာရတဲ့ ဦးခင်ညွန့် 
မီဒီယာတွေမှာ တွေ့ လာရတဲ့ ဦးခင်ညွန့် 
ဒီရက်ပိုင်းဗိုလ်ခင်ညွှန်တယောက် မီဒီယာစာမျက်နှာမှပြန်တွေ့နေရပြီ။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်လွတ်လာစက အဆိပ်မရှိတော့သလိုလို၊ နိင်ငံရေးကိုစိတ်ကုန်သွားသလိုလို ။
နောက်သိပ်မကြာပါဘူးနာမည်ကျော်ကိုသူရ(ဇာဂနာ)ကိုခေါ်တွေ့၊တပည့်ကျော်လွှတ်တော်ကိုစားလှယ် ဇေကမ္ဘာခင်ရွှေ (ဒေါက်တာတု) ကဘဲ ကူညီသလိုလို နဲ့ ရွှေမော်ဝန်းဖောင်ဒေးရှင်းတခုထောင်၊ အခုလည်း ၂၄သိန်းတန်ဆေးကုသဆောင်ကို ဗိုလ်မှုးချုပ်တင့်ဆွေ( ငြိမ်း)နှင့်အတူ အလှူတွေလုပ်ပြပြီး မီဒီယာ ကနေ ပြည်သူမြင်ကွင်းကို တဖြည်းဖြည်းတိုးလာနေပါပြီ။
ဗိုလ်ခင်ညွှန်နဲ့သားများရဲ့ ခြေလှမ်းတွေကိုအထူးစောင့်ကြည့်ကြဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
အကျိုးလိုလို ညောင်ရေးလောင်းလုပ်ရပ်တွေလား တကယ်လား။
ဦးနေ၀င်းသည် အာဏာကို နောက်ကွယ်က ကိုင်တွယ်ရာတွင် စစ်တပ်ကို ပြန်ချုပ်ထားနိုင်ရန်အတွက်- ၈၈၈၈-အပြီးတွင် ထောက်လှမ်း ရေးအဖွဲ့ကို အလွန်ကြီးစွာ ချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီး သူလက်သပ်မွေးထားသော ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာထူးသို့ တင်ပေးခဲ့သည်။ ခြေလျင်ကြည်းတပ်က ဗိုလ်မှူးကြီးက- ထောက်လှမ်းရေးက တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ကိုပင် သတိထားကြောက်ရွံ့လာရသော အခြေအနေ သို့ရောက်ရှိခဲ့ရသည်။ ဘုန်းကြီးတစ္ဆေ မကြောက်..ဆိုသကဲ့သို့ -တပ်ကလာသော ဦးနေ၀င်းသည် စစ်တပ်ကို မည်သို့ ကိုင်တွယ်ရမည်ကို ကောင်းစွာသိလေသည်။အရှင်မွေးခြင်း နေ့ခြင်းကြီး..ဆိုသကဲ့သို့ ဦးနေ၀င်း လက်သပ်မွေးထားသော ဗိုလ်ခင် ညွန့်သည်လည်း တဟုန်ထိုး ထိပ်ပိုင်းသို့ရောက်ခဲ့ရလေသည်။ဦးနေ၀င်းသည် ဗိုလ်ခင်ညွန့်ကို Gastapo အဖြစ် အသုံးချပြီး-စစ်တပ်နှင့်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များကို ထိန်းချုပ်စေချင်ပုံ ရခဲ့သည်။
Aung Lin Htut step father is Khin Nyunt.
ဇာဂနာဆိုတဲ့မအေလိုးကလဲစောက်ကျင့်ကမကောင်းပါဘူး ခင်ညွန့် နဲ့ တွဲလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မအေလိုး ၀င့်သိဂ်ီဆိုတဲ့ အငြိမ့်မင်းသမီးကိုဖင်ပါလိုးထားတာ။
ခင်ညွန့် တို့ကောင်းစားသမျှ မြန်မာပြည် မကောင်း မှတ်သာထား
You can never trust him as he still has his very own brain washed followers here and there, even oversea -:)
သစ်ခွ စိုက် ပြီး စားနေရ တယ်ဆို ?
ခုတော့ ဖွက်ထားတဲ့ ရွှေချောင်း ရွှေတုံးတွေ
ပုံးလိုက် ထဲ့ထား တဲ့ ဒေါ်လာတွေ
ကျောက်သံ ပတမြားတွေ ... ထွက်လာပြီ မလား ..
ဇာဂနာ လည်း မယုံတော့ ဘူး ..
မင်း ဟာသတွေ လည်း Xီး တောင် မရီတော့ဘူး